မပျော်ပါဘူး... အမေရယ်... — Steemit
billionairehein (61) in myanmar •5months ago
... မပျော်ပါဘူး အမေရယ် ...
စာအုပ်တွေ အများကြီး ဝယ်ဖတ်ခဲ့တယ် အမေ
ကဗျာ အဖြစ် ချရေးထားခဲ့မိတယ် အမေ
အားအားရှိတိုင်းလည်း စာတွေ ဖတ်နေခဲ့သလို
စိတ်ကူးရတိုင်းလည်း စာတွေ ချရေးနေခဲ့တယ် အမေ
သားလေ Facebook ဆိုတာကြီးကို
အသုံးပြုလို့ သာယာခဲ့ဖူးတယ် အမေ
အမေ ပဲ စဉ်းစားကြည့်လေ...
စာရေးတာ ဝါသနာပါတဲ့ သားလေ
Facebook ပေါ် စာတွေ ရေးတင်ရတော့
ဒါတင် မကဘူးလေ အမေရဲ့
ကမ္ဘာမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ ဟောပြောရေးစာရေးဆရာတွေရဲ့
Facebook မှာ Group တွေထောင်၊ Page တွေထောင်ပြီး
နှစ်တွေ ကြာရှည်လို့ Facebook သုံးတာတောင်
၆ နှစ် ပြည့်တော့မယ် အမေ...
ဒီလိုနဲ့ ကိုယ်ဝါသနာပါရာ Bill ကုန်ခံပြီး
နောက်ထပ် ပြောရဦးမယ် အမေရေ...
၂၀၁၇ ကုန်ခါနီး ဒီဇင်ဘာမှာတော့
Steemit ဆိုတာကြီး ထပ်တွေ့ရတယ်ဗျ
Steemit ကြီးက Facebook လိုပဲ
Post တွေ တင်ရတာပဲ...
ဒါပေမယ့် ထိုဟာကြီးက Cryptocurrency ဆိုတဲ့
ကိုင်တွယ်လို့မရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ရတယ် ဆိုပဲ...
Steemit ဆိုတဲ့ Social Media Platform ကြီးက
Own Creator တွေကို တန်ဖိုးထားသတဲ့ဗျ
Copyright ကို အလေးထားသတဲ့ဗျ
Facebook ထက် ပိုပျော်တာပေါ့ အမေရာ...
အမေ့သား ကံကောင်းတယ် အမေ
Steemit ကို အသုံးပြုစမှာပဲ
Myanmar Steemit Community ဆိုတဲ့
Steemit Myanmar User Newbies တွေကို
အကူအညီပေးနေတဲ့ အဖွဲ့ကြီးနှင့် ချိတ်ဆက်မိပြီး
သိပ်သိပ် ပျော်တာပဲ အမေ...
ဟိုတုန်းက ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာပေထဲက
"မိမိဝါသနာပါရာ လုပ်ရင်း ဝင်ငွေ ရနိုင်မလား"
ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေနိုင်တော့မယ် အမေ...
ခု သား ဝါသနာပါတဲ့ စာတွေ ရေးတင်နေရင်း
ဝင်ငွေ ရတော့မယ်လေ အမေရဲ့...
ဟိုးဟိုးတုန်းက ရေးခဲ့တဲ့ စာတွေကို ဖုန်းလေးဖြင့်
စာတွေ ရိုက်ပြီး တင်နေခဲ့တာ...
ခုဆို ၈ လ ကျော်ခဲ့ပါပြီ
ဝင်ငွေတော့ တစ်ကျပ်မှ ထုတ်သုံးဖူးသေးပါဘူး အမေ
ပိုတိုပွားအောင် ဆိုပြီးတော့ မြန်မာငွေ သုံးသိန်းဖိုးလောက်ပါ
ဝယ်ထည့်ပြီး စုထားပါတယ် အမေ
ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ဖြင့် နှစ်ရှည်ပင် စိုက်သလိုပေါ့ အမေရယ်
ဒီလိုနဲ့ ဒီလိုနဲ့ပါပဲ အမေရယ်...
ဈေးကျလို့ မဟုတ်ပါဘူး အမေရယ်...
စာမရေးနိုင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး အမေရယ်...
ဟိုတုန်းက ရေးခဲ့တဲ့ စာတွေပဲ တင်နေခဲ့တာလေ
Steemit က စာကောင်းကောင်းရေးတဲ့သူတွေကို
ချီးမြှင့်တဲ့ အနေဖြင့် Upvote ကောင်းကောင်းပေးကြတယ် လို့
အဲလိုမျိုး ချီးမြှင့်တဲ့Upvote တွေ Comment တွေ
အဲတော့ သား စာရေးမကောင်းလို့ ပေါ့ဗျာ
ကံလေးကောင်းလို့ MSC လို အဖွဲ့ထဲ ဝင်ပါခွင့်ရတာကြောင့်
အချင်းချင်း မကြိုက်လည်းပေး ၊ ကြိုက်လည်းပေး
မကျေနပ်လည်း ပေး၊ ကျေနပ်လည်း ပေး
အဲလို ပေးနေကြရတဲ့ Upvote လေး၊ Comment လေးတွေတော့ ရတာပေါ့ဗျာ...
အဲလိုရတော့ ကိုယ်ကလည်း အဲလိုပဲ ပြန်ပေးရတယ် အမေရဲ့
သားတို့ MSC ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ အစွမ်းအစဖြင့်
နိုင်ငံခြားက Tom တို့ရဲ့ Curie အဖွဲ့ကြီးဆီက
Promotion Upvote တွေ အလှည့်ကျ ရခဲ့ပေါ့ အမေရာ...
အစက ပျော်သလိုလိုတော့ ရှိသား အမေရေ
သားလေ မပျက်မကွက် ပို့စ်တင်ခဲ့တာပါ အမေ...
နေ့တိုင်းရလို့ နေ့တိုင်း ရေးတင်နေပါတယ် အမေ
ရှက်သလိုလို ဖြစ်လာတယ် အမေ...
Steemit ကို ဘာလို့ သုံးခဲ့တာလဲ
ဘာ ဘာ ဘာ ဘာမှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိဘူး အမေ
သား ဝင်ထားတဲ့ ၊ အကူအညီ ရယူနေခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ကြီးကရော...
သူများဆီက အကူအညီ ယူနေတာ
သား တိတိကျကျ နားလည်နိုင်စွမ်း မရှိဘူး အမေ...
ကိုယ့်အားကို မကိုးနိူင်တဲ့ ဒုက္ခိတ တစ်ယောက်လို
စဉ်းစားရင်း စဉ်းစားရင်းနဲ့ ဝမ်းနည်းလာတယ် အမေ
သား ယုံကြည်ချက်တွေ ဆွံ့အလာတယ် အမေ
11:00 / 30,08,2018
myanmar community life busy writing
5 months ago by billionairehein (61)
ကြိုက်လည်းပေး မကြိုက်လည်းပေး မဟုတ်ရပါ ကိုဟိန်းရယ် ကိုဟိန်းရဲ့ secret အတွဲတွေအားလုံး note ယူထားတဲ့အထိ ကြိုက်မိပါတယ်
မတ်မတ်တို့ ကူညီနိုင်တဲ့တစ်နေ့ ရောက်မှာပေါ့ကွယ် အပြင်မှာ စာရေးရင်လဲ စာမူခရတယ်မလား ခုလဲ အာ့လိုလို့သာ မှတ်ပါလေ တစ်နေ့နေ့ကျ မတ်မတ့်တို့က pro စုပေးကြသူတွေ ဖြစ်ကြမှာပါလို့ 😊
MSC ဖြစ်ရင်တော့ ကောင်းမှာပါ မတ်မတ်ရေ...
အဲ့လိုအတွေးတွေ ၀င်ဖူးလို့ စတီးမစ်ကနေ အကြာကြီး ပျောက်နေခဲ့ဖူးတယ်... ဒါပေမယ့် MSC ကအရမ်းနွေးထွေးလို့ရယ်။ ကြိုက်လည်းပေး မကြိုက်လည်းပေး vote လေးတွေ ရတယ်ဆိုတာထက် ကိုယ်အားစိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့ စာလေးတွေပေါ်မှာ လာဖတ်ပေးကြတဲ့သူတွေရဲ့ အမြင်လေးတွေ လာရေးပေးကြတာကို သဘောကျလို့ ပြန်ရေးဖြစ်တာ...။
အမြင်လေးတွေ ရေးကြတာ ကောင်းပါတယ်
စိတ်တူညီညွတ်သူလေးတွေ ရှိသေးလို့ နေဖြစ်နေပါသေးတယ်။
မပျော်လဲ မပျော်ဘူး အမေရယ် …
ခုလု ခုလု ဖြစ်နေတာ B Pyae ရေ...
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended witha10.86% upvote!
I was summoned by @billionairehein. I have done their bidding and now I will vanish...
တစ်ခါတလေ ဤ ကိုကျွဲဖတ်လို့ရပါတယ်။
အားလုံး ညီရင် ဤ ကို ကျွဲ ဟု ဖတ်ကြတယ် ဆိုပေမယ့်
ကိုယ်က စာအုပ်ကြီးသမား ဖြစ်နေ ထင်ပါတယ်...
ရင်ထဲမှာ ခုလု ခုလု ဖြစ်နေလို့ပါ အန်တီရေ...
အမေအကြောင်းလေးရေးတော့ အိမ်ကအမေကိုတောင် လွမ်းမိလာတယ်
အမေ အကြောင်း ပါပါဘူးဗျာ
ခလုပ်ထိမှ အမိတ သလိုမျိုး ကိုယ့်ခံစားချက်တွေ အမေကို တိုင်တည်တာပါ
onlyprofitbot (8) ·5months ago
Thank you so much for using our service! Congratulations! This round earned an ROI of 157.41% with total bids of: 0.376$
You just received 11.94% upvote from @onlyprofitbot courtesy of @billionairehein!
စာရေးသူလည်း အကျိုးရှိ စာဖတ်သူလည်း အကျိုးရှိ ဖြစ်ကြဖို့ပါ
အလဟသ အချိန် မကုန်စေချင်ဘူးလေ
​ပျော်​ သလား​ဟေ့ ​မောင်​တို့​ရေ့......
(ဘဘယု ခံစား​ရေးဖွဲ့သည်​)ဟိ ဟိ
မနောက်ပါနဲ့ ဘယုရာ ...
ရင်ထဲ ကလိကလိ ဖြစ်နေလို့ပါ
You gota5.93% upvote from @emperorofnaps courtesy of @billionairehein!
You gota10.18% upvote from @minnowvotes courtesy of @billionairehein!
မပျော့ တပျော်လေး အမေရယ်
မတ်မတ်စု ကတော့ ပျော်သလို နေပါဗျာ
ပျော်တာပေါ့ အမေရယ် ပျော်တာပေါ့...
အများကြီး မတွေးဘဲ အေးအေးလူလူ နေနိုင်ရင် ပျော်မှာပါ ဦးထွေးရေ...
You gota10.76% upvote from @dailyupvotes courtesy of @billionairehein!
Congratulations @billionairehein! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
ဖတ်ရတာ ရင်ထဲ ထိတယ်
အားမငယ်‌ပါနဲ့ဗျာ ။MSC မှာ ကိုဟိန်းက ‌နေရာတစ်‌‌နေရာ ယူထားနိုင်‌ပြီဘဲ။MSC မှာ ဘာသာပြန်‌စာ‌ပေ‌ရေးတာ လက်‌‌ရေချိုးလို့ရပါတယ်‌။‌တော်‌တန်‌skill နဲ့မရပါဘူး။ဆရာ‌ဖေမြင့်‌တို့လို ဖြစ်‌‌အောင်‌ steemit မှာ လက်‌‌သွေး‌နေ‌ပေါ့ ကိုဟိန်းရာ။အ‌မေ‌ရေ သား ‌ပျော်‌‌နေပပြီလို့ ‌ပြောလိုက်‌စမ်းပါဗျာ။
အမေရေ ပျော်နေပါတယ်လို့ အော်ပစ်လိုက်ချင်ပါတယ်
တွေးရင်း တွေးရင်းနဲ့ ရင်ထဲ ကလိကလိ ခုလုခုလု ဖြစ်နေတာ
တစ်နေ့တစ်ခုထက် ပိုရေးနိုင်ရင်ရော ပေးနိုင်ပါ့မလားလေ.😁😁😁
အားမလျော့နဲ့ရောက်လုပီဆိုသလိုပဲ ကိုယ့်ပန်းတိုင်ကိုသာ မျက်ခြည်မပြတ်ပါစေနဲ့ ကိုယ့်ပန်းတိုင်ကိုသာ ဆက်လက်ချီတက်ပါ သူများပန်းတိုင်ကို လှမ်းကြည့်မနေပါနဲ့ ဆက်လက်ချီတက်ပါရဲဘော်ဟိန်း ☺☺☺ အဲလို့မဟုတ်ရင်လေ ပန်းတိုင် မဟုတ်ပဲ ပမ်းတိုင် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ရဲဘော်ဟိန်း ☺☺☺
တခါတလေတော့ ပုထုဇနော ဥမ္မာတကော အရ
အော အော ဂလိုလည်းခံစားကြည့်တယ်လား
တစ်ဆင့်ချင်းကို သေသေချာချာ ခံစားပြီးရေးဖွဲ့ ထားတာပါ..အမေ။ အေးပါ.. သားရေ အမေတို့ လည်း မင်းအရွယ်တုန်းက ဒီလိုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး မိမိယုံကြည်ချက်တွေ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာမှုတွေနဲ့ ကြိုးစားရုန်းကန်ရှေ့ဆက်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေဆီလျှောက်လှမ်းခဲ့ကြတာပါ။ကံ ညဏ် ဝီရိယ သုံးခုဆုံဖို့အတွက် သားဘက်က ဇွဲ လုံလ ဝီရိယနဲ့ ကြိုးစားပြီး ပျော်အောင်နေပါသား။ဒီလိုသားဘက်ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင် ထိုအရာသုံးခု တစ်နေ့တော့ ဆုံပါလိမ့်မယ်သားရေ။
အစ်ကိုခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကိုသန့်ဇင်ပါ။ဒီလိုလေးစဉ်းစားမိ၍ရေးခဲ့မိပါသည်။မလေးစားသလို ဖြစ်သွားမှာတော့ စိုးရိမ်မိပါတယ်အစ်ကို။လေးစားအားပေးနေပါ့မယ်ခင်ဗျာ။
ကံဉာဏ်ဝီရိယ သုံးခုဆုံ ဖို့က မျှော်လင့်ရမှာပါလေ
ကိုယ့်ဘက်ကတော့ ဉာဏ်နှင့်ဝီရိယပဲ စိုက်ထုတ်နိုင်တာလေ
ဒီနှစ်ခုပေါင်း ကြိုးစား အလုပ်လုပ်တော့ အလုပ်ကောင်းရင် ကံကောင်းမှာပါလေ
အဲ့ခါကြရင် ပျော်ပါတယ် အမေရယ် ဆိုပြီး ရေးဖို့သာ ပြင်ထားပါလေ
ဟုတ်ကဲ့ ပျော်ချင်ပါတယ်ဗျာ ..အဲဒီခါကြရင်
တစ်​​နေ့​တော့ ကိုယ်​လည်းကူညီနိင်​တဲ့သူတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​လာမှာပါ ကိုဟိန်းရာ ခု​တော့ အ​ကောင်းဆုံး​တွေ လုပ်​ပြ​နေပါတယ်​လို့
ကိုယ်​လည်းတတ်​နိင်​သ​လောက်​ကူညီကြရမှာပဲ ​လေ အများကို
ခု​တော့စာကို အ​ကောင်းဆုံုးဖစ်​ဖို့ ကြိုးစား​ရေး​နေပါတယ်​ဗျာ
ခုလို သိရတာ ဝမ်းသာပါတယ်
ဟုတ် ကျေးဇူးပါ ဆရာ